Gudoomiyaha Golaha shacabka oo la kulmay Ergayga Gaarka ah ee Gurmadka Abaaraha – GOBOLADA.COM
Gudoomiyaha Golaha shacabka oo la kulmay Ergayga Gaarka ah ee Gurmadka Abaaraha
June 12, 2022 June 12, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Gudoomiyaha Golaha shacabka oo la kulmay Ergayga Gaarka ah ee Gurmadka Abaaraha
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa maanta kulan la qaatay Ergeyga gaarka ah ee Madaxwaynaha JFS u qaabilsan arrimaha Abaaraha mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Wasrsme oo ay weheliyaan gudigga gurmadka Abaaraha, kulanka oo diirada lagu saaray sidii wax loogu qabanlahaa Abaaraha soo-noqnoqday.
Gudiga Abaaraha oo ay Guddoomiyaha ka codsadeen in lagu waraajiyo qaybtii Baarlamaanka BJFS abaaraha uga qoondeeyey lacagihii musharaxiinta Madaxwaynaha JFS laga qaaday si wax loogu qabto dadka tabaaleysan kuwaas oo ku kala nool qeybo ka mid gobolada dalka.
Sidoo kale guddiga ayaa Gudoomiyaha ka codsadey in Baarlamaanku ku daba galo sababta weli Xukuumadda u sheegi la dahay qoondada ay ugu talo gashey lacagtii Dowladda Imaaraadka Carabta ugu deeqdey abaaraha dalka kajira iyo weliba lacagtii Halka milyan (1 M) ahayd ee Xukuumadda sheegtey inay abaaraha ugu yaboohdey oo aan ilaa hadda jirin wax hormar ah oo laga sameeyey.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka JFS mudane Sheekh Aadan Madoobe oo bogaadiyay shaqada adag ee ay hayaan Gudigga Abaaraha ayaa u ballan qaadey sii xoojinta garab istaagga dar-dar gelinta shaqada baaxada leh ee u taala Ergeyga iyo gudigga, sidoo kale Guddoomiyaha ayaa ballan qaadey in beri lagu wareejin doono lacagihii Baarlamaanka horey u ballanqaadey ee qaybta ka ahaa lacagihii ka soo xaroodey Murashaxiinta Madaxwaynaha JFS.
Ergayga Gaarka ah ee Arimaha Gurmadka Bani’aadanimada iyo Abaaraha oo la kulmay Wasiirada gargaarka ee Maamul Gobnoleedyada .
Madaxweyne Xasan sheekh oo qaabilay Ganacsatada Soomaaliyeed ee Dalka Kenya+ Sawiro
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya oo Dalka Tanzaniya kula kulmay Dhiggiisa Dalkaas
May 25, 2022 May 25, 2022 Abdukadir
Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay israsaaseeyn dhexmartay Ciidamo ka Tirsan Militariga Soomaaliya
May 5, 2022 May 5, 2022 Abdukadir
Dhageyso: Madaxweyne Farmaajo oo markii 3aad Maanta la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud